Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, May 12, 2012 Saturday, May 12, 2012 Labels: ရသစာစုများ
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်များက ဖလော်ရီဒါမြောက်ပိုင်းဒေသရဲ့ ပူအိုက်လှတဲ့ တစ်ခုသော နွေရာသီမှာ အသက် ၇နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ သူ့အိမ်နောက်ဖက်က ရေကန်မှာ ရေဆင်းကူးဖို့ စိတ်ကူး ရလိုက်တာနဲ့ အိမ်နောက်ဖေးတံခါးကနေ ပြေးထွက်သွားပါတယ်.. ရေကန်ဘက်ကို သွားနေရင်းနဲ့ ဖိနပ်၊ ခြေအိတ်၊ အင်္ကျီ စတာတွေကိုလည်း ဆွဲချွတ်သွားခဲ့ ပါတယ်။ ရေကန်နားရောက်တယ် ဆိုရင်ဘဲ အေးစိမ့်နေတဲ့ရေပြင်ထဲကို ဒိုင်ဗင် ထိုးဆင်းလိုက်ပါတော့တယ်။
ကောင်လေး ရေကန်ထဲမှာ ကူးခတ်ကစားနေရင်းနဲ့ တဖြေးဖြေး ရေကန်အလယ်ကို ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာဘဲ ရေကန်ရဲ့ တစ်ဖက်ခြမ်းမှာ ရောက်နေတဲ့ မိကျောင်း တစ်ကောင်ဟာ ကောင်လေးကို မြင်လိုက်ပြီး ကောင်လေးရှိရာကို တိတ်တဆိတ် ကူးခတ် လာခဲ့ပါတော့ တယ်။ အဲဒီမြင်ကွင်းကို အိမ်ထဲက ပြတင်းပေါက်ကနေ သားလေး ရေကူးတာ ကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူက လှမ်းမြင်လိုက်ပါတယ်။ မိကျောင်းနဲ့ တဖြေးဖြေး နီးကပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ သားလေးအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေနဲ့ အိမ်ထဲကနေ ရေကန်ဆီ ပြေးထွက်လာတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူဟာ ပါးစပ်ကနေလည်း သူ့သာလေးကြားအောင် အသံကျယ်နိုင်သမျှ ကျယ်ကျယ်အော်ပြီး ကမ်းစပ်ကို ပြန်ကူးလာဖို့ အော်ဟစ် ပါတော့တယ်။
သူ့အမေအော်သံကို ကြားလိုက်တဲ့ ကောင်လေးဟာ အလန့်တကြားဖြစ်ပြီး မိခင်ရှိရာဘက်ကို အလျှင်အမြန် ပြန်လည် ကူးခတ်လာပေမဲ့ ကမ်းစပ်ကို ရောက်ချိန်မှာ မိကျောင်းဟာလည်း သူ့အနီးကို ရောက်လာပါပြီ။ မိခင်က ကောင်လေးရဲ့ လက်ကို လှမ်းဆွဲ လိုက်နိုင်ချိန်မှာ မိကျောင်းကလည်း ကလေးရဲ့ ခြေထောက်ကို လှမ်းကိုက်လိုက်ပါပြီ။ အဲဒီမှာ မိကျောင်းနဲ့ လူအကြား အကြိတ်အနယ် ပြိုင်ပွဲ တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ မိခင်ဟာ အားစိုက်ပြီး ကလေးရဲ့ လက်မောင်းကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆုပ်ကိုင်ပြီး အပေါ်ကို ဆွဲတင်ပါတယ်။ မိကျောင်းကလည်း ခြေထောက်ကို မလွတ်တမ်း ဆွဲကိုက်ထားပါတယ်။
ရေကန်စပ်မှာ မိခင်နဲ့ မိကျောင်းတို့ အားပြိုင်ပြီး ဆွဲနေကြတာဟာ မယုံနိုင်လောက်အောင် အံ့သြဖို့ ကောင်းလှပါတယ်။ မိကျောင်းဟာ မိခင်ဖြစ်သူထက် အင်အား ပိုမိုသန်မာသော်လည်း သားကို ချစ်တဲ့ မိခင်ရဲ့ ဇောဟာ ကြီးမားလွန်းလှတဲ့အတွက် မိခင်ဟာ လုံးဝအလျော့မပေးဘဲ သားလေးရဲ့ လက်တွေကို တင်းကြပ်အောင် ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ကမ်းပေါ်ကနေ အတင်းဆွဲထားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အော်သံတွေကို ကြားတဲ့ အခြားသော အိမ်နီးချင်းတွေ ရောက်လာပြီး မိကျောင်းကို ဝိုင်းပြီး ရိုက်နှက် ပစ်ခတ်ကြတော့မှ မိကျောင်းဟာ ကလေးကို လွှတ်ပြီး ထွက်သွားပါတော့တယ်။
အဲဒီဖြစ်ရပ်အပြီးမှာ မိကျောင်းကိုက်ခံရလို့ ခြေထောက်မှာ ဒဏ်ရာများစွာ ရရှိသွားတဲ့ ကလေးငယ် ဟာ ဆေးရုံမှာ တက်ရောက်ကုသ ခံယူရပါတယ်။ လပေါင်းများစွာကြာလို့ ဒဏ်ရာတွေ သက်သာ လာပေမဲ့ ခြေထောက်မှာတော့ ရုပ်ဆိုးလှတဲ့ အမာရွတ်ကြီးတွေ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် ဒဏ်ရာတွေကတော့ ကလေးငယ်ရဲ့ လက်ပေါ်က ခပ်နက်နက် ခြစ်ရာကြီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကလေးငယ်ကို မိကျောင်းပါးစပ်ထဲ ပါမသွားစေလိုတာကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ မေတ္တာဇော အပြည့်နဲ့ အားစိုက်ပြီး ဆွဲလိုက်တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ လက်သည်းတွေဟာ ကလေးရဲ့ လက်မောင်းသားထဲကို နက်နက်နဲနဲ ဝင်ရောက်သွားခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်လေး ဆေးရုံက ဆင်းတဲ့အခါမှာ သတင်းစာတစ်စောင်ရဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်က မိကျောင်းရန်ကနေ လွတ်မြောက်ပြီး အသက်ရှင်လာတဲ့ ကောင်လေးကို အင်တာဗျုး လုပ်ဖို့ရောက်လာပါတယ်။ သတင်းထောက်ဖြစ်သူက ကောင်လေးရဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို ပြဖို့ တောင်းဆိုတဲ့ အခါ ကောင်လေးဟာ မျက်နှာ မသာမယာနဲ့ မိကျောင်းကိုက်ခံရတဲ့ သူ့ခြေထောက်က ဒဏ်ရာတွေကို ဘောင်းဘီရှည် လှန်ပြီး ပြပါတယ်။ ခြေထောက်က အမာရွတ်ကြီးတွေဟာ ကြီးမားပြီး ရုပ်ဆိုးလှပါတယ်။ မြန်မြန်ပြပြီးတာနဲ့ သူ့ဘောင်းဘီကို ပြန်ဆွဲချလိုက်ပြီးနောက် သူ့ရဲ့ အင်္ကျီလက်ကို ပင့်လိုက်ပြီး လက်ဖျံပေါ်က ဒဏ်ရာတွေလည်း သတင်းထောက်ကို ပြပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာတော့ ကောင်လေးရဲ့ မျက်နှာဟာ မသာမယာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
“ ဟောဒီမှာကြည့်.. ဒီမှာလည်း ကျွန်တော်ဒဏ်ရာတွေ ရထားတယ်။ ဒီဒဏ်ရာတွေကတော့ ကျွန်တော့် မေမေဟာ ကျွန်တော် မိကျောင်းနောက်ကို ပါသွားမှာစိုးလို့ သူ့လက်တွေနဲ့ တအား ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ အတွက် ရလိုက်တဲ့ ဒဏ်ရာတွေပါ။ ကျွန်တော့်မေမေက ပိန်ပိန်းလေးရယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ကို မိကျောင်းကိုက်တော့မှ မေမေ ဘယ်လောက် အင်အားကြီးတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် သိသွားတော့တယ်” လို့ ကောင်လေးဟာ ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ သတင်းထောက်ကို ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။
ကောင်လေးရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ သူ့လက်ပေါ်က အမာရွတ်တွေအတွက် စိတ် အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပုံမရဘဲ ဂုဏ်ယူနေဟန် အထင်းသား တွေ့နေရပါတယ်။ မိကျောင်းတစ်ကောင်ရဲ့ ခွန်အားကိုတောင် တုဖက်ပြိုင်နိုင်တဲ့အထိ သူ့မေမေဆီမှာ သားသမီးကို ချစ်တဲ့၊ စိုးရိမ်တဲ့ စိတ်ဇောတွေနဲ့ ခွန်အားတွေ ရှိလာတာကို ဂုဏ်ယူနေပုံလည်း ရပါတယ်။ မိခင်တိုင်းဟာ သားသမီးတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဘယ်လောက် ကြီးမားတယ်ဆိုတာ ကောင်လေးရဲ့ လက်ဖျံပေါ်က အမာရွတ်တွေက သက်သေဘဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့ အန္တရာယ်ဖြစ်ပါစေ မိခင်တွေက သားသမီးတွေရှေ့ကနေ မားမားမတ်မတ် ကာကွယ်ကြ၊ ကယ်တင် ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ နှိုင်းတုလို့မရတဲ့ အနှိုင်းမဲ့ မိခင်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဲ မဟုတ်ပါလား။
Alligator Scars (Unknown Author) ကို ကမ္ဘာ့မိခင်များနေ့အတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ မိခင်များကို ဦးညွှတ်ရင်း ခံစားရေးဖွဲ့ ဘာသာပြန်ပါတယ်။ သားသမီးတိုင်းရဲ့ အားလုံးသော မိခင်များ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေရှင်။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Friday, May 11, 2012 Friday, May 11, 2012 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဒီတစ်ပတ်အတွက် ဖော်ပြချင်တဲ့ ဟင်းလျာက ခုလို သရက်သီးပေါတဲ့ ရာသီမှာ သရက်သီးကို ဟင်းတစ်မည်အဖြစ် လုပ်စားလို့ရနိုင်မဲ့ ဝက်သားသရက်သီးကြော် ဖြစ်ပါတယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲ မဟုတ်တဲ့ ဝက်သားသရက်သီးကြော်ဖို့အတွက် လိုအပ်တာတွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြပါမယ်နော်။
ဝက်သားများကို အနေတော်အရွယ် ခပ်ပါးပါးလှီးပြီး ဆား၊ အရသာမှုန့်၊ ဟင်းချက်ဝိုင် အနည်းငယ်တို့နဲ့ နယ်ထား လိုက်ပါတယ်။
သရက်သီးအစိမ်းကို အခွံနွာပြီး ပါးပါးလှီးထားပါတယ်
ကြက်သွန်ဖြူ၊နီ၊ ဂျင်း၊ ငရုပ်သီးတို့ကို ပြင်ထားပါတယ်။
ဝက်သားကို အရင်ကြော်ပြီး အသားကျက်ပါက ကြက်သွန်၊ ဂျင်းများထည့်ပြီး သရက်သီးကိုထည့်ကြော်လိုက်ပါတယ်။ ဆား၊ အရသာမှုန့်၊ ငံပြာရည်တို့ကို သင့်တင့်သလို ထည့်ပါတယ်။
အချိန် ခဏကြာရင် သရက်သီးများ ပျော့အိမသွားခင်မှာ ချလိုက်ပါတယ်။
ငရုပ်သီးစိမ်းနဲ့ ကြော်တဲ့ ဝက်သားသရက်သီးကြော်
အချဉ်အရသာလေးနဲ့ ဝက်သားကို မအီအောင်ကြော်ဖို့အတွက် ဝက်သားသရက်သီးကြော် ရပါပြီနော်။
အားလုံးဘဲ ပျော်ရွှင်အဆင်ပြေသော နေ့ရက်များကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေရှင်။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, May 09, 2012 Wednesday, May 09, 2012 Labels: ရသစာစုများ
ကျွန်မ မှတ်မိသလောက် ပြန်စဉ်းစားရရင် ကျွန်မဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက မျက်စိနောက် စရာ ကောင်းလောက်အောင် ဆူညံ ခုန်ပေါက် နေတတ်ပြီး စူးစမ်းလိုစိတ်များကာ စိတ်ဓာတ်လည်း ပြင်းထန် တဲ့ မိန်းခလေး တစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်မရဲ့ မေမေကတော့ ကျွန်မနဲ့ ဆန့်ကျင်စွာဘဲ အေးဆေး တည်ငြိမ်ပြီး ရှေးရိုးစွဲ အစဉ်အလာခပ်ကြီးကြီး၊ စကားနည်းနည်းနည်းနဲ့ အိမ်ရှင်မကောင်း တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ မေမေနဲ့ ကျွန်မ သဘောထားခြင်း မတိုက်ဆိုင်တိုင်း ကျွန်မနဲ့ မေမေ့ကြားက အသက်အရွယ် ကွာဟမှုကိုအကြောင်းပြပြီး ကျွန်မက မေမေ့ကို အပြစ်တင်လေ့ရှိတတ်ပါတယ်.. မေမေက ကျွန်မကို အသက် ၃၈နှစ်မှာမှ မွေးခဲ့တာပါ။ ကျွန်မကို မွေးတဲ့ခေတ်အနေအထားနဲ့ဆို အသက်၃၈နှစ်ဆိုတာ ကလေးမွေးဖို့ သိပ်ကို နောက်ကျနေတဲ့ အသက်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မမိဘတွေရဲ့ အသက်အရွယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်း အသိုင်းအ၀န်းကြားမှာ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်တဲ့ ခံစားချက်မျိုးတော့ ဘယ်တုန်းကမှ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး… ကျွန်မကို စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေတာက မေမေတို့ရဲ့ စည်းကမ်းတင်းကြပ်မှုနဲ့ ရှေးရိုးဆန်လွန်း အားကြီးမှုသာ…
အမြဲတမ်း တက်ကြွလှုပ်ရှားပြီး ပြာလောင်ခတ်နေတဲ့ ကျွန်မနဲ့ အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီး အိနြေ္ဒကြီးတဲ့ မေမေရဲ့ကြားမှာ ပဋိပက္ခဆိုတာကတော့ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ ကြုံတွေ့ရမဲ့ ကိစ္စတွေသာဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်မရဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် အချိန်ကာလေတွေတုန်းက မေမေနဲ့အမြဲတမ်း အငြင်းအခုန်ဖြစ်ရတယ်.. သဘောထားတွေ ကွဲလွဲနေခဲ့တယ်.. အဲဒီချိန်တုန်းက မေမေနဲ့ ကျွန်မကြား အကြီးမားဆုံး ပြဿနာတစ်ခုက ယောက်ျားလေး ကိစ္စနဲ့ ပါတ်သက်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ တွဲသွားတွဲလာ လုပ်ဖို့ကို မေမေက အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ပါတယ်.. တော်တော်လေးလည်း ချုပ်ချယ်ခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်မရဲ့ အသက် ၁၈နှစ်ကို ရည်းစားထားဖို့ အရမ်း ငယ်သေးတယ်လို့ အကြောင်းပြပါတယ်..
ကျွန်မက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုပြင်းထန်တဲ့ သူတစ်ယောက် လည်း ဖြစ်တော့ မေမေ့ အကြောင်းပြချက်ကို လက်ခံနိုင်စရာ မရှိဘူး ဖြစ်နေပါတယ်.. ဒီအသက်အရွယ်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တာဝန်ယူနိုင်တယ် အမှားအမှန် ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်ခဲ့ပါတယ်.. စဉ်းစားဆင်ခြင်ဥာဏ်ရှိတဲ့ ကျွန်မအနေနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို တကယ် မချစ်ခင်မနှစ်သက်ဘဲ အပျော် သက်သက် တွဲမှာ၊ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာတော့ မေမေ နားလည်ပေးသင့်တယ် လို့ တွေးမိခဲ့ပါတယ်.. ဒီတော့ မေမေရဲ့ ရှေးရိုးစွဲ အစဉ်အလာကို မုန်းမိသလို မေမေ့ကိုလည်း ကိုယ့်သမီးအပေါ်မှာ နားလည်မပေးနိုင်ရကောင်းလားလို့ မကျေမနပ် ဖြစ်မိပါတယ်.. မေမေဟာ အသက်အရွယ်ကြီးနေပြီဖြစ်လို့ ဒီနေ့ခေတ်နဲ့ အလှမ်းကွာနေပြီး ခေတ်လူငယ်တွေကို နားလည် မပေးနိုင်တော့ဘူး၊ ခေတ်ကို မသုံးသပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ ကျွန်မ ယူဆခဲ့တယ်။
ကျွန်မ တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်မှာ ကျွန်မချစ်သူနဲ့စပြီး ဆုံတွေ့ခဲ့တယ်… သူက လူတော် တစ်ယောက်ပါ.. ရုပ်ရည်လဲရှိ၊ ပညာလဲတော်တယ်.. စိတ်သဘောထားလဲ မဆိုးဘူးလို့ ပြောရမယ်... သူနဲ့ ချစ်သူဘ၀ ရောက်သွားတဲ့အခါ ကျွန်မမိဘတွေနဲ့ သူ့ကို မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်.. မေမေတို့က ရည်ရည်မွန်မွန် ရှိတဲ့ သူ့ကို သဘောကျပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ မေမေရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာတော့ ကျွန်မအပေါ်ထားတဲ့ စိုးရိမ်သောကလေးကို တွေ့နေရဆဲပါ.. မေမေက ကျွန်မကို ဘယ်တုန်းကများ ယုံကြည်စိတ် ထားခဲ့လို့လဲလေ.. ကျွန်မချစ်သူနဲ့ ကျွန်မဟာ တကယ်လဲ နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြပါတယ်.. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လဲ ကြင်ကြင်နာနာ ရှိခဲ့ကြပါတယ်.. ဒီလိုနဲ့ ချစ်သူသက်တမ်း တစ်နှစ်ကို အေးအေးဆေးဆေး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ကျော်ဖြတ် လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ မမျှော်လင့်တဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့် ကျွန်မချစ်သူနဲ့ ရုတ်တရက် လမ်းခွဲလိုက်ရပါတယ် သူဟာ ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး ရည်းစားဦးလဲဖြစ်တယ်.. ကျွန်မကိုယ်တိုင်က နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်ခင်စုံမက်ခဲ့ရသူလဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူနဲ့လမ်းခွဲချိန်မှာ ကျွန်မအသည်းနှလုံးတစ်ခုလုံး မွမွကြေသွားသလို ခံစားရပါတယ်.. ဘ၀ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ၊ရည်မှန်းချက်တွေ အားလုံး ပျက်စီးကုန်တယ်ပါတယ်.. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရင့်ကျက်ပြီ၊ အရာရာကို သိနားလည်ပြီလို့ ထင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မဟာ ချက်ခြင်းဘဲ ဘာမှ မသိ၊နားမလည်တဲ့သူ တစ်ယောက်လို ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်မချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲပြီးချင်းချင်းမှာဘဲ ကျွန်မဟာ မေ့မေဆီကို ပြေးသွားပြီး သူ့ပုခုံးပေါ်မှာ ကလေးတစ်ယောက်လို ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုချမိပါတယ်.. အဲဒီချိန်မှာ မေမေဟာ ကျွန်မကို အပြစ်တင်တာ၊ ဆူပူကြိမ်းမောင်းတာ ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်သလို ငါမပြောဘူးလား အစက ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ စတဲ့ စကားတွေလည်း ဘာတစ်ခွန်းမှ မပြောခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မရဲ့ လက်ကလေးကို အသာအယာ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ငယ်ငယ်က မေမေ နမ်းနေကျ ပုံစံအတိုင်း ကျွန်မရဲ့နဖူးလေးကို ဖွဖွလေးနမ်းပါတယ်.. ကျွန်မ အရှက်ရအောင်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်ချင်တဲ့စိတ်တွေ ဝင်လာအောင် မေမေက ဘာတစ်ခွန်းမှ အပြစ်တင်စကား၊ ဆုံးမစကား မပြောခဲ့ပါဘူး.. ကျွန်မပြောသမျှကို တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဘဲ ကျွန်မကို ကြည့်ပြီး အလေးအနက် နားထောင်နေပါတယ် မေမေရဲ့ မျက်ဝန်းမှာလည်း လောလောလတ်လတ် အသည်းကွဲနေတဲ့ ကျွန်မနဲ့ထပ်တူ မျက်ရည်တွေ ကျနေခဲ့ပါတယ်။
စကားတွေလဲ ပြောပြီးလို့ ငိုလို့ အားရပြီးတဲ့နောက် မေမေ့ကို ရင်ဖွင့်လိုက်ရတဲ့အတွက် ကျွန်မစိတ်လဲ အတော်အတန် ပေါ့ပါးသွားပါပြီ.. ဒါပေမဲ့ ကျွန်မရင်ထဲမှာတော့ နားမလည်နိုင်ခြင်းများစွာ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်.. စိတ်တွေလဲ ရှုပ်ထွေးနေခဲ့တယ်.. ဘာလို့များ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာ ကျွန်မကိုမှ လာပြီးဖြစ်တာလဲ.. ဒီလောက်ချစ်ခဲ့တဲ့ ချစ်သူရဲ့ အပြစ်မြင် စွန့်ခွာခြင်းကို ဘာကြောင့်များ ကျွန်မရရှိတာလဲ.. ကျွန်မရင်ထဲမှာ ဒေါသတွေလဲ ထွက်နေခဲ့ပါတယ်။ မေမေ့ကိုလဲ ဒီအကြောင်းကို ဖွင့်ပြောမိတယ်.. ဒေါသတကြီး ပြောနေတဲ့လေသံကို ကျွန်မကိုယ်တိုင်တောင် အံ့အားသင့်မိတယ်.. ကျွန်မဟာ သူငယ်နှပ်စားမဟုတ်သလို မလှမပနဲ့ အသိဥာဏ် မရှိတဲ့သူလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါနဲ့တောင် ကျွန်မချစ်သူက ဘာကြောင့်များ လမ်းခွဲရတာလဲ.. ကျွန်မတို့ဟာ ဘာကြောင့်များ အဆင်မပြေဖြစ်ရတာလဲ .. ကျွန်မ တော်တော်လေးကို ခံပြင်းမိပါတယ်။ ဝမ်းလည်းနည်းတယ် ယူကျုံးမရလည်း ဖြစ်မိပါတယ်။ ဘဝမှာ ဆက်ပြီး နေချင်စိတ် မရှိတော့သလိုကို ခံစားရပါတယ်။
ကျွန်မမေမေဟာ ဘယ်တော့မှ ဖွင့်မပြောခဲ့တဲ့ ပွင့်လင်းမှုမျိုးနဲ့ ကျွန်မကို ငြင်ငြင်သာသာ ရှင်းပြပါတယ်. မေမေဟာ သူ့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ဟပြောတယ်ဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ပါဘူး.. အမြဲတမ်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ စည်းကမ်းတင်းကြပ်သူမို့ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ မေမေရဲ့ငယ်ဘဝဟာ ဘယ်လိုများ နေပါလိမ့်လို့ သိပ်ကို သိချင်စိတ် ပြင်းထန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မေမေ့ကို ဘယ်တုန်းကမှ မမေးရဲခဲ့ပါဘူး။ အခုတော့ မေမေဟာ သူ့ငယ်ဘဝအကြောင်းကို ပြောပြနေခဲ့ပါပြီ. သူရဲ့ ပထမဆုံး အချစ်ဦးနဲ့ ကွဲခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာ သေလုမတတ် ခံစားရခဲ့ရပြီး ဘဝကြီးတစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားတော့မတတ် ဖြစ်ခဲ့ဖူးကြောင်း၊ အရူးတစ်ယောက်လို ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေ ပြောပြပြီး အချိန်တစ်ခု ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ချိန်မှာတော့ ဘယ်လိုခံစားချက်သာ ရှိတော့တယ် ဆိုတာတွေ ပြောပြပါတော့တယ်။
မေမေဟာ သူ့ရည်းစားဦးကြောင့် အသည်းကွဲတဲ့အချိန်မှာ နှစ်ပတ်တိတိ မရပ်မနား ငိုကြွေးနေခဲ့ပါတယ်တဲ့.. အဲဒီချိန်မှာ လောကကြီးဟာ သူ့အတွက် ဘာမှ မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့သလို၊ ဘ၀ကြီးတစ်ခုလုံးဟာလည်း အဓိပ္ပါယ် မရှိတော့သလို ခံစားခဲ့ရကြောင်းနဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုကို ကျော်ဖြတ်ပြီးသွားချိန်မှာတော့ နာကျင်ခံစားခဲ့ရတာတွေဟာ တစ်ဖြေးဖြေး ပျောက်ကွယ်သွားရပြီးတဲ့နောက် မှတ်ဥာဏ်ထဲမှာ အဲဒီအသည်းကွဲတဲ့ ဒဏ်ရာဟာ ခပ်မှိန်မှိန်လေးသာ ကျန်ရစ်ခဲ့တော့ကြောင်း ပြောပြပါတယ်.. ပြီးတော့လဲ ကျွန်မကိုပြောတာက တစ်ချိန်ချိန်မှာ ကျွန်မဟာ နောက်ထပ် ချစ်ရမဲ့သူ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီး လက်ထပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ အခုအသည်းကွဲတဲ့ အဖြစ်ကို ပြန်တွေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ ပြုံးစရာလေး တစ်ခုအဖြစ်နဲ့သာ ကျန်ရစ်တော့မှာ သေချာပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မေမေရဲ့ စကားတွေကိုကြားမိတော့ ကျွန်မ စိတ်သက်သာရာ ရလာသလို အံ့သြတကြီးလဲ ဖြစ်ရပါတယ်.. ကျွန်မ အကြီးအကျယ်အံ့သြမိတာက တစ်ခြားမဟုတ်ပါဘူး.. မေမေ့ရဲ့အချစ်ဦးဟာ ကျွန်မရဲ့ဖေဖေ မဟုတ်ခဲ့တာကိုပါ… လူတော်တော်များများဟာ ချစ်တိုင်းလည်း ညားကြတာ မဟုတ်သလို၊ အချစ်ဦးတိုင်းနဲ့လည်း ပေါင်းခွင့်ရချင်မှ ရတာဖြစ်ကြောင်း မေမေက သူ့ကိုယ်သူ နမူနာပြပြီး ကျွန်မကို ရှင်းပြပါတယ်.. မေမေဟာ ခုချိန်မှာ ကျွန်မရဲ့ မိခင်တစ်ဦးအဖြစ်သာမက ကျွန်မလို အဖြစ်မျိုးကို ကြုံခဲ့တဲ့ ဘ၀တူ မိန်းမသားတစ်ဦး ဖြစ်နေတာကိုပါ သိခွင့်ရလိုက်တော့ အံ့သြမိတဲ့ စိတ်နဲ့အတူ မေမေ့အပေါ်မှာလည်း ပိုပြီး ရင်းနှီး တွယ်တာစိတ် ဖြစ်လာတယ်.. ပြီးတော့လည်း ကျွန်မရဲ့ အသည်းကွဲဒဏ်ရာကလည်း သက်သာရာ ရလာသလို ခံစားမိရပါတယ်.. သူ့အကြောင်းတွေကို ဘယ်တုန်းကမှ မပြောပြခဲ့တဲ့ မေမေဟာ ခုချိန်မှာတော့ မေမေရဲ့အချစ်ဦးအကြောင်းတွေကို ကျွန်မကို မကွယ်မဝှက်ပြောနေတဲ့ အတွက် မေမေ့ အပေါ်မှာ ကျွန်မရဲ့ ခံစားချက်က မိခင်တစ်ဦး အဖြစ်သာမက အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အဖြစ်ပါ စိတ်ထဲမှာ လက်ခံ သဘောထားလာမိပါတော့တယ်.။
ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ကျွန်မဘဝမှာ ဘယ်လိုဘဲ အခက်အခဲကြုံလာ၊ ဘယ်လောက်ပဲ ဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်တွေ့လာပါစေ မေမေနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး မေမေ့ဆီက အကြံဥာဏ်တွေ၊ စကားတွေ ခွန်အားတွေနဲ့ အတူ ကျွန်မရဲ့ အခက်အခဲ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်.. သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းကိစ္စ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ကျွန်မရဲ့ ရည်းစား ကိစ္စ၊ စတဲ့ ကိစ္စအားလုံးကို မေမေ့ကို ကျွန်မက မချွင်းမချန် ပြောပြလေ့ရှိပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း အသည်းကွဲတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ကျွန်မဘ၀မှာ ထပ်ပြီး ကြုံတွေ့လာရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မထမဆုံး အသည်းကွဲတုန်းကလို အသည်းအသန် ခံစားချက်မျိုး မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း လူတွေဟာ အချစ်ဦးကြောင့် ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်က ဘာနဲ့မှ မတူဘူးလို့ ခိုင်းနှိုင်းကြတာဘဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.။ ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်လေ .. အချစ်ဦးဆိုတာ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘ၀ရဲ့ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံလဲဖြစ်တာကိုး။
ကျွန်မက ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးမဆို မေမေ့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တိုင်ပင်တယ်။ အသိပေးတယ်.. မေမေ့ဆီက အကြံဥာဏ်တွေရယူလေ့ရှိတယ်.. ကျွန်မနဲ့ မေမေရဲ့ ဆက်ဆံရေးက သားအမိဆက်ဆံရေးထက် အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း ၂ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးနဲ့ ဥပမာပေးတာက ပိုပြီး နီးစပ်ပါလိမ့်မယ်.. အဲဒီလို မေမေနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် နွေးနွေးထွေးထွေး ပြောဆိုတိုင်ပင်ရတာကိုလည်း ကျွန်မက သဘောကျတယ်.. ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတောင် မေမေနဲ့ ကျွန်မတို့ ၂ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးကို အားကျကြတဲ့အကြောင်း မကြာခန မှတ်ချက်ပေးရလောက်အောင် ကျွန်မနဲ့မေမေဟာ စေးကပ်ရင်းနှီးခဲ့ကြပါတယ်.. ဒါကိုလည်း ကျွန်မနဲ့ မေမေက ဂုဏ်ယူကြပါတယ်။
နှစ်အတန်ကြာလို့ ကျွန်မခင်ပွန်းလောင်းဖြစ်လာမဲ့သူနဲ့ စပြီးဆုံတွေ့တော့ ပထမဆုံး ကျွန်မလုပ်တဲ့ အလုပ်က အဝေးက မေမေ့ဆီက ဖုန်းခေါ် မိတာပါဘဲ… ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ ကျွန်မခင်ပွန်းလောင်းဖြစ်တဲ့ သူ့အကြောင်းတွေ ပြောပြပါတော့တယ်.. သူ့အကြောင်းတွေပြောပြနေတဲ့အခါ တစ်ဘက်ကနေ မေမေက ကျွန်မစကားသံကို တိတ်ဆိတ်စွာ နားထောင်နေရင်း စကား ဆုံးခါနီးတော့ ကျွန်မကို စကားလေး တစ်ခွန်း လှမ်းမေးပါတယ်.. “ သမီး… သမီးရဲ့ ပထမဦးဆုံး ရည်းစားဦးကြောင့် အသည်းကွဲခဲ့တာကို မှတ်မိသေးလား” တဲ့.. ကျွန်မလဲ မေမေရဲ့ အမေးကို ခပ်ဖွဖွရယ်သံလေးနဲ့ “ မှတ်မိတယ်မေမေ.. ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲ ” လို့ ပြန်မေးလိုက်တော့ မေမေရဲ့ ပြန်ပြောသံလေးမှာ ကျွန်မအပေါ် ကြင်နာသနားမှုနဲ့ နားလည်စာနာမှု အပြည့်ပါတဲ့ လေသံလေးဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်မရင်ထဲက ခံစားလိုက်မိပါတယ်.. မေမေက အဲဒီချိန်မှာ ကျွန်မကို ပြန်ပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းက “သမီး အခု အဲဒီအကြောင်း ပြန်စဉ်းစားမိတော့ ပြုံးနေတယ်မဟုတ်လား ” တဲ့။
ကျွန်မ နားလည်လိုက်ပါတယ်.. မေမေဘာကြောင့် ဒီချိန်မှာ ဒီလိုမေးခွန်းလေးကို မေးလိုက်တယ်ဆိုတာကိုပေါ့.. ကျွန်မ ပထမဆုံး ရည်းစားဦးနဲ့ ကွဲတဲ့အချိန်တုန်းက ကျွန်မဘ၀ကြီးတစ်ခုလုံး အဓိပ္ပါယ်မဲ့သွားခဲ့တယ်၊ မျှော်လင့်ချက်ဟူသမျှ ဆိပ်သုဉ်းသွား ခဲ့တယ်၊ ဒီအသည်းကွဲတဲ့ ခံစားချက်ကြီးကဘဲ ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက် အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ထင်ခဲ့မိတယ်လေ.. အသက်ဆက်ရှင်သန်ဖို့တောင် အင်အားမရှိတော့သလို ခံစားခဲ့ရတယ် မဟုတ်လား.. ဒါပေမဲ့ အချိန်ကာလလေး တစ်ခု ကြာသွားတဲ့အခါမှာတော့ အသည်းကွဲတုန်းက ခံစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီခံစားချက်တွေဟာ အခု ပြန်တွေးလိုက်ချိန်မှာတော့ ပြုံးစရာလေးတစ်ခုသာ ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီ မဟုတ်ပါလား။
Chicken Soup for Every Mom's Soul မှ Sophia Valles Bligh ရဲ့ First Love ကို ဘာသာပြန် ခံစားရေးဖွဲ့ပါသည်။
(လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်က ဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့ စာလေးပါ။ လတ်တလော အသည်းကွဲနေတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက် အတွက် ဒီစာလေးကို ပြန်တင်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ )
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, May 06, 2012 Sunday, May 06, 2012 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဒီနေ့အတွက် ဖော်ပြချင်တဲ့ဟင်းလျှာက ပြည်ကြီးငါး ရောင်စုံကြော်ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး ရှင်။ ပြည်ကြီးငါးတွေ ကို ရောင်စုံ အသီးအနှံတွေနဲ့ ကြော်တာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ကြီးငါးတွေကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး အရွယ်တော်အတုံးများတုံးက အပေါ်မှာ ဓါးနဲ့ မွှန်းပါတယ်။
ပြည်ကြီးငါးနဲ့ ကြော်ဖို့ အဝါရောင်ပြောင်းဖူးကို အစေ့လေးတွေခြွေပြီး အနီရောင် အစိမ်းရောင် ငရုပ်ပွတို့ကို အရွယ်တော် လှီးဖြတ်ထားပါတယ်။
ပြည်ကြီးငါးကို ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်းတို့ဖြင့် ကြော်လိုက်ပါတယ်။
ပြည်ကြီးငါးကျက်ခါနီးမှာ ပြောင်းဖူး၊ ငရုပ်ပွတို့ကိုထည့်ပြီး ဆား၊ အရသာမှုန့်၊ ပဲငံပြာရည်တို့ကို ထည့်ပါတယ်။
အသီးပျော့မသွားစေဘဲ ကျက်ရုံသာ ကြော်ဖို့လိုပါတယ်။ ခုဆိုရင် ဖြူနီစိမ်းဝါ အရောင်စုံတဲ့ ပြည်ကြီးငါး ရောင်စုံကြော် ကို ရပါပြီ။
ချစ်ခင်ရပါသော မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ပျော်ရွှင်သော အားလပ်ရက်များဖြစ်ကြပါစေရှင်..
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, May 05, 2012 Saturday, May 05, 2012 Labels: သုတအဖြာဖြာ
အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ဒီနေ့ဟာ ကဆုန်လပြည့် - ဗုဒ္ဓနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အနေနဲ့ အလွန် ထူးခြားတဲ့ နေ့လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ ထူးခြားတာလဲဆိုရင် ကျွန်မတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့လည်း ကဆုန်လပြည့်နေ့ဟာ ဘုရားရှင် သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော် ရခဲ့တဲ့နေ့ ဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ သာသနာသက္ကရာဇ် နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ ပြည့်တဲ့နှစ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကဆုန်လပြည့်နေ့ဟာ ဒီပင်္ကရာ ဘုရားရှင်ထံသုမေဓာ ရသေ့ဘဝနဲ့ ဂေါတမဘုရားစင်စစ်ဧကန်ဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ် ခံယူသောနေ့၊ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား ဖွားတော်မူသောနေ့၊ ဗောဓိပင် နဲ့ ရွှေပလ္လင်ကို အောင်မြင်ပြီး ဘုရားဖြစ်တော်မူသောနေ့၊ ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်သောနေ့ စသည့် ထူးမြတ်သောဗုဒ္ဓနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နောက်ထပ် ထူးခြားတာ တစ်ခုကတော့ ဒီည ကဆုန်လပြည့်နေ့မှာ မြင်ရမဲ့ လမင်းကြီးဟာ ပုံမှန်လပြည့်နေ့ထက် ၁၄ရာခိုင်နှုန်းပိုကြီးမှာဖြစ်ပြီး ပုံမှန်ထက် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း အလင်းရောင် ပိုမိုတောက်ပမဲ့ Super Mon ဖြစ်မဲ့နေ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လဟာ ပုံမှန်လှည့်ပတ်ချိန်များထက် ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ အနီးကို ကီလိုမီတာ ၅၀၀၀ခန့် အနီးဆုံး အခြေအနေထိ ပိုမို နီးကပ်လာတာကြောင့် ဖြစ် ပါတယ်။
Super Moon ဖြစ်မဲ့ လပတ်လမ်းကြောင်း
ဘာကြောင့် အဲဒီလို အနီးဆုံးအခြေအနေကို ရောက်ရှိရသလဲ ဆိုရင် လဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ဘဲဥပုံသဏ္ဍာန် ပတ်လမ်းကြောင်း အတိုင်း လှည့်ပတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို လှည့်ပတ်တဲ့ အခြေ အနေမှာ အပေါ်မှာ ဖော်ပြ ထားတဲ့ ပုံအတိုင်း Perigee moon ဆိုတဲ့ နေရာဟာ လပတ်လမ်းကြောင်းမှာ ကမ္ဘာနဲ့ အနီးဆုံး ရောက်တဲ့ လမ်းကြောင်းနေရာကို ရောက်လာတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။ (ကမ္ဘာနဲ့ ဝေးရာ ဘက် ရောက်တဲ့ လပတ် လမ်းကြောင်းကိုတော့ Apogee Moon လို့ ခေါ်ပါတယ်) ဒါကြောင့်လည်း ယနေ့ညမှာ ပြည့်ဝတဲ့ လမင်းကြီးဟာ Perigee moon နေရာ အနေအထားကို ရောက်ရှိမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ကမ္ဘာနဲ့ အနီးဆုံး ဖြစ်နေတာကြောင့် ခါတိုင်းထက် ရွှန်းရွှန်းမြမြ သာနေမဲ့ လမင်းကြီး ကို မြင်တွေ့နိုင်မှာပါ။
ဒီပုံကတော့ ၂၀၁၀ မတ်လ၁၉ရက်နေ့ Super Moon လပြည့်ညနဲ့ ၂၀၁၀ခု ဒီဇင်ဘာ ၂၀ရက်နေ့က သာမန်လပြည့်ည တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ပြထားတာပါ။
ပုံမှန်လပြည့်အရွယ်အစားနဲ့ Super Moon ဖြစ်မဲ့ လအရွယ်အစားတို့ နှိုင်းယှဉ်ပြထားပုံ
အပေါ်ပုံမှာတော့ အရှေ့က လဟာ ပုံမှန် လပြည့်ညတွေမှာ မြင်ရတဲ့ လဖြစ်ပြီး အနောက်က လကတော့ မနက်ဖြန်မှာ သာမဲ့ လမင်းကြီးရဲ့ အရွယ်အစား ဖြစ်တယ်လို့ နှိုင်းယှဉ်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ဖြန်မှာ ထူးထူးခြားခြား ကြီးမားနေတဲ့ လမင်းကြီးကို အကောင်းဆုံးနဲ့ အကြီးဆုံး၊ အရှင်းလင်းဆုံး မြင်ခွင့်ရမယ့် အချိန်ဟာ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်း အနီးမှာ လမင်းကြီး ရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်ပါပဲလို့ နာဆာ(NASA)က သိပ္ပံပညာရှင်များကလည်း အကြံပြုထားပါတယ်။
မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းမှ ထွက်ပေါ်လာသော လပြည့်ညများ
Super Moon ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းချက် အသေးစိတ်ကို သိလိုရင်လည်း အောက်က YouTube လေးမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်နော်။
ဘယ်လိုပင်ဖြစ်စေ လပြည့်နေ့ကတော့ သဘာဝတရားကို စိတ်ဝင်စားသူအတွက်ဖြစ်စေ၊ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်၍ ဖြစ်စေ ထူးခြားတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်နော်။ သာသနာ သက္ကရာဇ် ၂၆၀၀-ပြည့်နှစ် နှင့်လည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်၊ Super Moon ဖြစ်စဉ်နဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်နေတဲ့ ထူးခြားလှတဲ့ ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့မှာ ချစ်ခင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအားလုံး စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာနှင့် မိမိကောင်းကျိုး၊ အများကောင်းကျိုး ကိစ္စများ ပြီးမြောက် အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင် သူများ ဖြစ်ကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။